I-Villa Verde # 1 King Superior
San Andrés y Providencia, i-Colombia
Ikamelo e-ikhaya eliyindawo yokuhlala ibungazwe ngu-Luis
Ifaka i-wifi yamahhala kuzo zonke izindawo, ukusetshenziswa kwechibi lokubhukuda, ikhishi elihlome ngokuphelele kanye nendawo yokuphumula evulekile ongazipholela kuyo. Ahlotshiswe ngephansi le-parquet kanye nefenisha yokhuni, amagumbi ethu ezivakashi akhanyayo nahlanzekile ahlinzeka ngakho konke okudingayo ukuze uhlale unethezekile futhi uphumule.
I-Villa Verde ibonakala ngokuchichima kwemvelo yayo ekulungele ukuphumula futhi ujabulele iholide elithulile esiqhingini saseSan Andrés.
Amavayibhu amahle kanye nephrofayili encane ye-Villa Verde nayo ivelele kakhulu.
Indlu yethu enhle yezivakashi kanye nezindawo zokukhempa zisendaweni enokuthula yase-San Luis kude nesiphithiphithi sedolobha. Ukuhamba nje imizuzu emi-5 ukusuka e-San Jose Beach, i-Paradis de Colors (i-Villa Verde) inikezela ngengadi ebanzi nenhle yasezindaweni ezishisayo lapho ungakhululeka khona emvelweni kuyilapho ujabulela ubuhle base-San Andres. Ngaphakathi kwengadi yethu yasezindaweni ezishisayo, sinedamu lokubhukuda elinakekelwe kahle kanye nendawo yokuphumula lapho ungajabulela khona ukukhanya kwelanga futhi uzame ukubona ama-iguana amaningi, izibankwa kanye nama-hummingbirds abelana nathi ngemvelo yethu.
Kunezimakethe ezincane ezimbili eziqhelelene nje nenkundla, kanye nesevisi yebhasi ehamba njalo usuku lonke, enikeza ukufinyelela kuso sonke isiqhingi. Siphinde futhi sinikeze izinhlobonhlobo zokuvakasha nemisebenzi ezungeze isiqhingi, ochwepheshe be-scuba diving nomfundisi we-scuba diving esizeni.
Ukuze ubone ukuthi simayelana nani, bukela ividiyo yethu emfushane: https://www.youtube.com/watch?v=MAkuibeQxEQ&t=16s
Iyindawo yasemaphandleni eduze nolwandle, futhi izungezwe uhlaza lwendabuko, izihlahla zikakhukhunathi kanye nomhlabathi enotshani. Singaphansi kwamamitha angu-200 ukusuka olwandle emgqeni oqondile, futhi amabhishi angcono kakhulu e-San Luis awuhambo lwemizuzu eyi-10.
Eningizimu-ntshonalanga yeCaribbean kune-Seaflower Biosphere Reserve, eyakhiwa i-San Andres, Providencia kanye ne-Santa Catalina Islands, lena iyikhaya leketango lesithathu elikhulu lamakhorali emhlabeni. I-Paradis de Colors Ecolodge, iseningizimu yesiqhingi sase-San Andres, komunye wemikhakha yendabuko yendabuko ebizwa ngokuthi i-San Luis, ingena emzileni we-Tom Hooker izinyathelo ezimbalwa ukusuka emabhishi.